Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Ferran Torres Akụkọ nwata na gbakwunyere ihe ndị ọzọ banyere akụkọ ndụ ha
Anyị Ferran Torres Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị na-agba ọsọ na Spanish. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, lee mgbe ọ bụ nwata gaa na galari okenye - nchịkọta zuru oke nke Ferran Torres 'Bio.
Ndụ na ịrị elu nke Ferran Torres.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ nwatakịrị ọhụrụ ahụ na ngọngọ- kpakpando sara mbara nke a maara maka ọnụego ọrụ ya na ịchọrọ maka enweghị atụ, ikepụta ihe, yana njikwa ọsọ na ọsọ.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole nke ndị hụrụ football n'anya tụlere ịgụ Ferran Torres 'Biography. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ferran Torres Storymụaka Akụkọ:
Otu n'ime foto izizi mara nwata nke Ferran Torres.
Iji bido, Ferran Torres García Amụrụ na 29th ụbọchị nke February 2000 na obodo Fois na Spain. Onye ọkpụkpọ Spanish bụ nwa nwoke mbụ na nke abụọ n'ime ụmụaka atọ nne ya na nna ya mụrụ.
Dị ka ndị obodo a na-akọ akụkọ ifo Andreas Iniesta, Xavi na Sergio Ramos, Ferran bụ bonafide Spanish.
N'ezie, ọ tolitere na ebe a mụrụ ya na Fois n'akụkụ nwanne ya nwanyị tọrọ ya na ezigbo enyi nwata "Arantxa" na obere nwanne nwoke a ma ama.
Foto nwata bụ Ferran Torres na nwanne ya nwanyị nke okenye bụ Arantxa.
Na-etolite na Fois, Ferran bụ onye na-anụ ọkụ n'obi na-agba bọl nke nwere ihe maka ikiri bọl na TV ma na-agba mbọ i imitateomi nkà ahụ nke ọ hụrụ ka ndị egwuregwu kpakpando gosipụtara. Mgbe ụfọdụ ọ nwetara ihe ziri ezi, oge ndị ọzọ ọ mehiere.
Ndị nne na nna Ferran Torres nọ n'akụkụ nnata mgbe ọ gbara bọl bọọlụ na-ezighi ezi. Mgbe ụfọdụ mkpọtụ nke ite ụlọ akụ́, ị breakingụ iko na ihe a tụrụ atụ na-enye ha nsogbu mgbe mgbe.
Otú ọ dị, ọ dịghị onye mere ihe ọ bụla iji mee ka ọ ghara inwe mmasị na football na ịhụnanya maka otu ụlọ ọ hụrụ n'anya - Valencia CF.
O toro dị ka onye na-anụ egwuregwu bọl. You nwere ike maa akara ngosi klọb dị n'isi ya? Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Okirikiri ezinụlọ Ferran Torres:
Dika nwatakiri, nne na nna Ferran Torres kpaliri ochicho ya maka football site na iwere ya gaa ulo egwuregwu Valencia CF Mestalla ebe ọ hụrụ ọtụtụ egwuregwu dị ka nwatakịrị ma gbaa akaebe banyere ịrị elu, ọnyà na mmeri nke ụlọ ọgbakọ Spanish.
Eziokwu bụ, nna ya na mama ya bụ ndị na-arụta ego n'etiti ụlọ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka tiketi egwuregwu maka onwe ha na ụmụ ha.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Ferran nwere ezigbo mmekọrịta ya na otu n'ime ndị mụrụ ya - ọkachasị nna ya nwere ezigbo enyi.
Zute otu n'ime ndị nne na nna Ferran Torres - nna ya dị mma (n'oge ọ bụ nwata).
N'ụzọ egwuregwu ahụ, Ferran na-eto eto toro dị ka onye na-akwado Valencia ma nwee nrọ nke igwu egwu maka Los Ches yana ịnakwere ọrụ ga-eme ya gafere oke osimiri Spain.
Ferran Torres Biography - The Football Akụkọ:
Ndị nne na nna Ferran Torres, ka ọ na-erule oge ọ bụ afọ 6 ji obi ụtọ hụ aha ya na usoro ndị ntorobịa nke Valencia ebe ọ malitere ịrụsi ọrụ ike na asọmpi asọmpi.
Mgbe Ferran nọ na ya, ọ malitere i modelomi ihe egwuregwu ya mgbe ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ obodo na nke mba gụnyere ndị akụkọ mgbe ochie David Villa bụụrụ onye egwu kpakpando maka Valencia n'oge ahụ.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke mgbe ahụ na-eme egwuregwu football na-emepe onwe ya na agụmakwụkwọ Valencia.
Dika nwatakiri nwere olile anya, Ferran enweghi nsogbu nke ibilite site na usoro ntorobia nke Valencia dika ya bu ezi olile anya ya na omume nke akowara umuaka.
Dịka nke a, Ferran nwetara ohere dị ụkọ iji mepụta mpụta mbụ maka ihe ndozi nke Valencia mgbe ọ dị nanị afọ 16 + ụbọchị ụfọdụ na Ọktoba 2016, ihe omume na-eme ka ọ bụrụ onye na-elepụ anya n'ọdịnihu dị anya.
Hụ onye bụ 16 afọ mgbe ọ malitere igwu egwu maka ebe Valencia.
Ferran Torres Biography - Tozọ Iji Mara Aha:
Randị Ferran dị mma na nkwụsi ike mechara hụ ya ka ọ bulie nkwalite na B's n'akụkụ Valencia n'ihu mkpọsa 2017-18, mmepe nke mere ka ndị otu egwuregwu mbụ ya nwee mmezu.
Valencia maara ọchịchọ Ferran ma egbughị oge ịbanye na ndọtị nkwekọrịta nkwekọrịta na nwata ahụ na Ọktọba 2017 tupu ịkwalite ya na otu egwuregwu klọb na 1st Jenụwarị 2018.
Onye winger ahụ nwere mgbatị nkwekọrịta dị mma tupu nkwalite ọ bịara n'ọnụ ụzọ ya mgbe ọnwa gachara.
Ferran Torres Biography - Bilie Iji Mara Aha:
Mgbe Ferran nwetara nkwalite nye ndị otu mbụ nke Valencia, Ferran mere nke ọma igosipụta uru ọ bara site na ịmalite mbido na Copa del Ray, La Liga na Champions League. Ọ bụ ụdị isi mmalite dị otu ahụ mere ka ama ama n'ọnụ ụzọ ya.
Iji malite, onye winger ghọrọ onye ọkpụkpọ izizi amụrụ na 2000s site na ndị otu Spanish ka ọ gụọ akara na asọmpi mgbe ndị Valencia nwere mmeri 4-1 na Lille na Nọvemba 2019. Ihe ngosi ahụ hụkwara ya ka ọ bụrụ onye na-eto eto nke Valencia kachasị na akụkọ ntolite asọmpi ahụ.
Nke mbụ: Lee Ferran's celeveration nke bọọlụ asọmpi nke mbụ ya.
Ferran Torres Lifehụnanya Ndụ - Onye Na-alụbeghị Nwunye, Nwanyị ma ọ bụ Nwunye?
Wkwụ ọ bụla dị ogologo ma mara mma dị ka Ferran nwere ike ịnọnyere nwunye ma ọ bụ nke ka njọ, na-enweghị enyi nwanyị. N'ụzọ dị ịtụnanya, Ferran alụghị di n'oge a na-ede akwụkwọ, na enweghi ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'alụghị di.
Onye uwe ojii ahụ ghọtara na ọ chọghị enyemaka nke enyi nwanyị (ọbụlagodi ma ọ bụghị) iji nweta ihe ndị ka mkpa ya ọkachasị ebe ọ ga-ejidekwu ohere ndị ịgba egwu bọọlụ elu-elu ga-enye.
Enweghị enyi nwanyị ọ bụla, ọ na-elekwa anya na foto a mara mma.
Ndụ ezinụlọ Ferran Torres:
N'azụ ihe ngosipụta dị ịtụnanya nke Ferran na nka na bọọlụ bụ ezinụlọ na-akwado. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndị ezinụlọ Ferran Torres na-amalite na nne na nna ya.
Banyere Ferran Torres Nna na mama:
Mama na papa Ferran bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na Valencia tupu a mụọ winger. Ha mere nke ọma ịkpọrọ ya gaa egwuregwu na Mastella gụnyere echefu echefu 2008 Copa del Ray ikpeazụ nke Valencia meriri.
Ndị nne na nna na-eme ya ka ọ bụrụ ọrụ nke ịga egwuregwu Ferran ma na-enye ya nkuzi oge niile banyere mkpa ọ dị ịdị umeala n'obi ma na-eme onwe ya.
Foto na-atụda azụ nke Ferran Torres na anụ ụlọ ya na nne ya.
Banyere ụmụnne nwanne Ferran Torres:
Ferran nwere ụmụnne abụọ ha gụnyere nwanne ya nwanyị nke okenye bụ Arantxa na obere nwanne nwoke a ma ama. O doro anya na Arantxa bụ onye kacha dịrị Ferran obi na onye na-elekọta akụkọ nwata.
Ọ maara ihe niile banyere obere bro ya na ha abụọ na-ekere otu ụdị arịlịka n'ụkwụ ha. Ọnwụ ahụ na-echetara duo ka ọ ghara ikwe ka ihe ọ bụla mee ka ha daa.
Ferran Torres na nwanne ya nwanyị nke okenye mara mma Arantxa. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Banyere ndị ikwu Ferran Torres:
Ewezuga ezinụlọ ezinụlọ Ferran Torres, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ ya n'ihi na ọ metụtara nne na nna ya na nne nne ya.
Enweghi ndekọ banyere nwanne nna nna ya na nwanne nwanne Ferran ebe amabeghị nwanne nwanne ya na nwanne ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
Ezigbo Ndụ Onye:
Nke a dị ka ụzọ amamihe nke igwu mmiri. Ọ bụ na Ferran abụghị onye amamihe?
Know mara Ferran Torres nwere odidi yiri ya nke na-egosipụta àgwà nke ndị akara zodiac bụ iberibe? Ọ dị umeala n’obi, nwee ọgụgụ isi, nwee ike ịrụ ọrụ ma nwee oke mmasi.
Na mgbakwunye, Ferran enweghị nsogbu na ikpughe eziokwu banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya. Mgbe onye ọkpọ ahụ na-anọghị na egwuregwu ọ nwere ike ịchọta ya na-arụ ọtụtụ ọrụ ndị amamịghe mmasị na ihe omume ntụrụndụ ya.
Ha gụnyere ịgagharị, igwu mmiri na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Speedgbọ mmiri ọsọ ndụ okomoko bụ nke ndị nnukwu ezumike na-eme njem. Winger bụ nnukwu ego.
Banyere otu Ferran Torres si eme ya ma na-emefu ego ya, ọnụ ahịa ya ruru ihe ruru nde Euro 1.5 na ide akwụkwọ akụkọ a.
Na-enye onyinye maka akụnụba winger gụnyere ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ nke mbụ. Na mgbakwunye endorsements na ụdị dị ka Adidas na-eme ọtụtụ ihe iji bulie ụgbụ ya bara uru.
N'ihi ya, Ferran abụghị onye ọhụụ nke ihe ụtọ nke ndụ gụnyere ịgụgharị n'okporo ámá Spain na ụgbọala ndị mara mma na ibi n'ụlọ ndị dị oke ọnụ. Kedu ihe ọzọ? Ferran na-emefu nnukwu ezumike na nnọkọ oriri na ọ realụ realụ siri ike.
Ferran Torres N'ihe banyere Eziokwu:
Ndị egwuregwu bọọlụ nwere ike ịchụEziokwu rget, ma ha na-echeta akụkọ nwata karịa. Nke a bụ ihe kpatara na nkebi ikpeazụ a nke Ferran Torres Biography, anyị na-enye gị obere akụkọ amachaghị ma ọ bụ akụkọ gbasara winger.
Eziokwu # 1: Anyị bibiri ụgwọ ọnwa ya:
Nkwekorita nke onye uwe ojii na Valencia CF na-ahụ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ buru oke nke £ 40,000 kwa izu. Salarygwọ ụgwọ nke Ferran Torres dị ntakịrị, anyị nwere ihe ndị a.
Ngota ya na Pound (£)
Ihe ọ na-enweta kwa afọ € 2,368,377.2 £ 2,085,600 $ 2,559,031
Ihe ọ na-enweta kwa ọnwa € 197,364.8 £ 173,800 $ 213,253
Ihe ọ na-enweta kwa izu € 45,898.8 £ 40,418 $ 49,593.6
Ihe ọ na-enweta kwa ụbọchị € 6,556.9 £ 5,774 $ 7,084.8
Ihe ọ na-enweta kwa elekere € 273.2 £ 240.6 $ 295.2
Ihe O Nwetara Kwa nkeji € 4.6 £ 4.0 $ 4.9
Ihe O Nwetara Kwa abuo € 0.08 £ 0.07 $ 0.08
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Ferran Torres Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nkezi nwoke na Spen bụ onye na-akpata ihe ruru € 1.889 otu ọnwa ga - arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala 2 afọ na ọnwa 1 irite € 45,898.8 nke bụ ego Ferran Torres na-enweta n’ime otu ọnwa (n’oge edere).
Eziokwu # 2: Gịnị bụ Ferran Torres 'Religion:
Ezinụlọ Ferran Torres bụ ndị Katọlik na-emekwa ihe na nke ahụ. N'ezie, ọ na-etinye uche na Nwaanyị Mary dị oke mkpa ma ghara ịkwa ụta mgbe ọ na-eme ihe ịrịba ama nke obe mgbe ọ bụla ọ banyere n'egwuregwu asọmpi.
Enwere ike ịhụ ya ebe ọ na-etinye okooko osisi n'akụkụ akpụrụ akpụ nke Virgin Mary.
Eziokwu # 3: Eziokwu randị randị Ferran Torres:
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Ferran nwere egbugbere ọnụ nke arịlịka na nwanne ya nwanyị nke okenye. Nkà a na echetara ha ka ha ghara inye ohere n’ime ihe ọ bụla nke nwere ike ime ka ike gwụ ha. Na mgbakwunye, Ferran nwere ntakịrị igbu egbugbere ọnụ na aka ya.
Eziokwu # 4: Ferran Torres 'FIFA Eziokwu:
You maara na Ferran Torres nwere ọkwa FIFA niile nke 78 n'oge ederede? N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-abụ obere oge tupu onye winger ahụ nweta ogo zuru oke nke 86 na-atụle ike ọ na-etinye.
Eziokwu nke 5: Banyere ụbọchị ọmụmụ ya na ụbọchị ya - 29 Febụwarị:
A mụrụ Torres na ụbọchị 29 nke February. Dị ka ndị dị otú a, ọ na-eme ememe ncheta ọmụmụ ya otu ugboro n'ime afọ 4 ọ bụla.
N'ụzọ dị mma, ọ mere ya na February 2020. Na mgbakwunye, afọ ọmụmụ ya 2000 bụ afọ nke "Ridley Scott"Gladiator”See sinima.
You maara na ọ bụkwa n’afọ ahụ ka amalitere magazin Oprah Winfrey na-ewu ewu? Ugbu a ị maara!
Fọdụ nsụgharị ndị bụ isi mere 2000 otu afọ iji cheta.
Ihe omumu banyere ndu.
Azịza nke Wiki.
Aha n'uju: Ferran Torres García.
A mụrụ: 29 Febrụwarị 2000 (afọ 20 dị ka ọ dị na Eprel 2020).
Ebe amụrụ onye: Foios, Spain.
Ndị nne na nna: Mr na Mrs García.
Ụmụnne: Arantxa (nwanne nwanyị nke okenye) na obere nwanne amaghi ama.
Religion: Iso Christianityzọ Kraịst (Katọlik).
elu: 1.84 m (6 ft 0 na).
arọ: 77 n'arọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Ferran Torres nke Childhoodmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.